Puntland Oo U Diyaargarowday Tartanka Maamul Goboleedada Soomaaliya | puntlandi.com
Maamulka Puntland, ayaa marti gelin doona tartanka kubada cagta maamul goboleedada Puntland sanadka soo socda ee 2018-ka, xilli tartanka sanadka dhacaya ay marti gelin doonto maamul goboleedka Jubbaland, waxaana uu ka dhacayaa magaalada Kismaayo.
Sanadkii hore, ayaa waxaa Koobka marti geliyay gobolka Banaadir, waxaana ku guulaystay Ciyaaryahanada maamulka Puntland oo ah horyaalka maamul goboleedada Puntland.
Xoghayaha xiriirka Kubada cagta Puntland Cabdulqaadir Cali Daahir , oo la hadlay Warbaahinta gudaha, ayaa sheegay in Puntland ay difaacan doonto horyaalka maamul goboleedada, waxaana uu rajo wannaagsan ka muujiyay in Puntland ay mar kale ku guulaysan doonto Koobka maamul goboleedada ee ka dhacaya magaalada Kismaayo.
Cabdulqaadir Cali Daahir, ayaa soo dhoweeyay ciyaaryahanada matalaya Puntland ee dhowaan laso xulay, kuwaas oo looga dhawaaqay magaalada Garowe, waana Kooxda Puntland matali doonta.
”Waxaan haysanaa muddo bil ah, waxaana ciyaaruhu ay bilaaban doonaan 20-ka bisha, waxaan sanadka xigga aan marti gelin doona Koobka, garoonkana waan hagaajin doona oo wuxuu la mid noqon doona kuwa Kismaayo iyo Muqdisho” Ayuu yiri isaga oo hadalkiisa sii wata.
Bisha soo socota ayuu Koobku si rasmi ah u bilaaban doona, waxaana socda qabanqaabada ay isku ciyaarinayaan ciyaaryahanada maamul goboleedada.
Si kastaba ha ahate, Puntland, ayaa sanadka la filayaa inay wacdaro ka dhici doonto Koobka Kismaayo ka dhacaya, waxaana ay noqon doontaa Kooxda difaacanaysa Koobka.